Bangiga Adduunka oo Soomaaliya u ogolaaday lacag dhan $137.5…
By axadle Last updated May 17, 2020
Qoraal lagu daabacay Bogga Bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya loo ogolaaday lacag dhan $137.5 million si wax loogu qabto Xaaladaha kasoo cusboonaaday dalka sida Covid-19, Fatahaadda Wabiyada iyo daadadka Roobka.
Bangiga Adduunka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay nolol ahaan ku tiirsan yihiin Dhaqashada Xoolaha 70%, taasina ay saameysay dhibaatooyinka soo kordhay oo ay uga sii horeysay isku dhacdayada labaatankii sano ee lasoo dhaafay dalka ka jiray.
Madaxa Bangiga Adduunka ee Soomaaliya Felipe Jaramillo ayaa sheegay in Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan, balse hadda oo ay kasoo kabaneysay dhibaatooyinkaas ay saameyn taban ku yeesheen xaaladaha isbiirsaday ee Coronavirus iyo fatahaadda Wabiyada.
Waxa uu soo jeediyay in lagama maarmaan ay noqotay in la garab istaago Soomaaliya, lana siiyo lacag dhan $137.5 million si Dowladdu ay ugu adeegsato wax ka qabashada dhammaan caqabadaha jira.
Felipe waxa uu bogaadiyay in dadaalka DFS ay sameyneyso, isaga oo sheegay in Bangiga adduunka uu ku gacansiinayo wax waliba oo lagu xaqiijin karo gaarista Guulaha Muuqda sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda XFS Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ka jawaabay lacagta loogu deeqay ayaa bogaadiyay go’aanka Bangiga Adduunka uu qaatay ee lagu taageerayo Soomaaliya.
“Waxa aan aad u soo dhaweynayaa talaabada Bangiga Aduunka ee uu Soomaaliya ugu ogolaaday lacag dhan $137.5 Milyan oo Dollar oo wax looga qabanayo xaaladaha Dalka ka jira sida xanuunka Covid-19, Fatahaadaha iyo Abaaraha” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdriaxmaan Ducaale Bayle.
Soomaaliya waxa ay kamid tahay dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo balse uu saameyay cudurka Coronavirus, maadaama xannibaad Xukumadda ay soo rogtay si loo yareeyo faafidda Covid-19 oo saameyn taban ku yeeshay dunida, isla markaana kala xir-xiray dalalkii isku safri jiray.